မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို မကြာခင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ရှိ၊ - ข่าวสด
မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို...
မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို မကြာခင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ရှိ၊
12 ก.ย. 2564 - 18:45 น.
ကိုဗစ် ၁၉ တတိယလှိုင်းကြောင့် ရပ်နားထားခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို မကြာခင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးလှသိန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် ၁၉ တတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားမှုမြင့်မားနေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်း ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုတွေဖြစ်လာနေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို ပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ တတိယလှိုင်းစတင်ဖြစ်ပွားလာနေတာကြောင့် ရောဂါကူးစက်ခံရမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့က ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မောင်တော ကညင်ချောင်းစခန်းနဲ့ စစ်တွေ ရွှေမင်းဂံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို နှစ်ပတ်ခန့်ရပ်နားထားခဲ့ရာကနေ ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုတွေ မြင့်တက်လာတာကြောင့် နှစ်လနီးပါးအကြာထိ ပြန်မဖွင့်နိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေဟာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ယာယီရပ်နားထားခဲ့တဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်ကောင်စီအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိရခိုင်မှာ ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ကျဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီစခန်းတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ အတည်ပြုချက်တွေကိုရရှိထားပြီဖြစ်တယ်လို့ ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
"နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို ပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို စာပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့် ယာယီပိတ်ထားခဲ့တဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မနေ့က အစည်းအဝေးမှာလည်း ပြန်ဖွင့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြည်နယ်ကျန်းမာကလည်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလအတွင်းမှာတော့ ပြည်ထောင်စုကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။"လို့ ပြည်နယ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်း အဲ့ဒီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို ပိတ်သိမ်းထားခဲ့ရပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာဟာ အဲ့ဒီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေတစ်ဆင့် ဒေသတွင်းကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေအကြား ယုံကြည်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှစ် တတိယလှိုင်းမစတင်ခင် ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကစတင်ပြီးတော့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေမှာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောတွေက ရေယာဉ်လုပ်သားတွေမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး တတိယလှိုင်းအတွင်း ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သင်္ဘောသား ၁၀၀ ဦးဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ စာရင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အဲ့ဒီစခန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာလည်း အရင်ကလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကို ချမှတ်ပြီးတော့မှ ဖွင့်လှစ်ပေးသင့်တယ်လို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က ထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။
"ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘယ်လိုစနစ်တွေနဲ့လုပ်မလဲဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ အဲ့ဒီတော့ ပိုပြီးလုံခြုံတဲ့အစီစဉ်တစ်ရပ်နဲ့လုပ်ရင်တော့ ဒေသအတွက်က စီးပွားရေးအရ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ ပြန်လည်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်လုံခြုံရေးအခြေအနေအရတော့ သိပ်ပြီးလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ ဒေသကလူတွေက ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။"လို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးခင်အောင်ကြီးက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ဒေသတွင်း စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အချိန် လက်လုပ်လက်စားလူတန်းစားတွေ အတွက် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုနှစ်အတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ တတိယလှိုင်းပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေ ကိုပြန်လည်ရပ်နားထားခဲ့ရတဲ့အချိန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အခက်အခဲနဲ့ကြုံကြရသလို အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လက်လုပ်လက်စားတွေအတွက် ဝင်ငွမရှိတော့တဲ့အထိ ဖြစ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကတော့ အဲ့ဒီစခန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့် လှစ်ပေးဖို့ မျှော်လင့်နေကြပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်မျိုးဗီဇသစ် ဝင်ရောက်လာမှာကိုလည်း ဒေသခံတွေဘက်က စိုးရိမ်မှုတွေလဘည်း ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကို မကြာခင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ရှိ၊